आमाले बुझेको गरिबी र बाले बुझेको विकास «
मंसिर १४, २०७७ आईतबार
अल्पविकसित देशहरूका लागि यो गरिबीको दुश्चक्र तोड्न सक्नु नै ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ ।अल्पविकसित देशहरूका लागि यो गरिबीको दुश्चक्र तोड्न सक्नु नै ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
म सानो छँदा मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो, हामी गरिब भएको हामीसँग पैसा नभएर हो । मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । जोसँग पैसा छ त्यो नै धनी हुन्थ्यो । धनी मानिसले जे पनि किन्न सक्थ्यो । किनभने ऊसँग पैसा हुन्थ्यो । अहिले पनि म यो कुरासँग एकदम सहमत छु । मानिस पैसा नभएका कारणले नै गरिब हुँदो रहेछ । यो यथार्थता हो ।मानिस सजिलै गरिबीबाट मुक्त हुन नसक्ने पनि हुँदो रहेछ । जोकोही पनि गरिब बन्न चाहँदैन र सबै नै धनी नै बन्न चाहन्छन् । धनी हुन नसके पनि गरिबीबाट भने छुट्कारा खोज्नु त सबैको चाहना हुन्छ नै । तर, यो अवसर सबैलाई मिल्दो रहेनछ पनि । अब प्रश्न आउँछ, गरिबीलाई कसरी तोड्ने त ?गरिबीलाई तोड्नुपूर्व यसको स्वरूपतर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त होला । हामी किन गरिब हुन्छांै ? किनकि हामी गरिबीको दुश्चक्रमा फसेका छौं ।
यो चक्रलाई तोड्न सकियो भने मात्र हामी विकास एवं समृद्धितर्फ जान सक्छौं । हामी किन गरिब छौं भने हामीसँग ज्यादै थोरै आम्दानी छ । जुन आम्दानीले घरखर्च चलाउन मुस्किल पर्छ । त्यसकारण हामीसँग कम मात्र बचत हुने भयो नै । कम बचत भएपछि लगानीमा कमी आउनु स्वाभाविकै भयो र परिणामस्वरूप उत्पादन कम हुन्छ नै । कम उत्पादन भएपछि आम्दानी कम हुन्छ नै । यसरी गरिबीको दुश्चक्र आम्दानी कम हुनुबाट सुरु भई आम्दानी कम हुनुमा नै गएर अन्त्य भएको हुन्छ । अर्थात् यसले वृत्ताकार रूप लिएको हुन्छ । यो चक्र घुमिरहेको पनि हुन्छ । यसलाई तोड्न सकियो भने मात्र विकासले गति लिन सक्ने हुन्छ ।
अल्पविकसित देशहरूका लागि यो गरिबीको दुश्चक्र तोड्न सक्नु नै ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ ।हाम्रो देशमा अझै पनि यस्ता आमा धेरै छन्, जसले गरिबी राम्रोसँग बुझेका छन् । किनकि उनीहरूको वरिपरि गरिबी नै घुमेको हुन्छ । जता हे-यो उतै गरिबी । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुरा उनीहरूलाई थाहै हुँदैन । उनीहरू गरिबीमै जन्मिएका, हुर्किएका, बढेका र यसैमा अस्ताउने हुन्छन् । घरको चौघेराभन्दा बाहिर निस्कन सक्ने औकात हुँदैन उनीहरूमा । वर्षौंसम्म रोग पालेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ उनीहरूको । शिक्षाको सम्बन्धमा कखरासम्म पनि चिन्न पाएका हुँदैनन् । शिक्षा पनि छैन, शरीर पनि स्वस्थ नभएपछि रोजगारी पाउने अवसर नहुने नै भयो । यसरी धेरै आमाहरूले गरिबीबाहेक अरू केही देखेका हुँदैनन्, चिनेका हुँदैनन् र सीमित घेरा नै उनीहरूको संसार बन्न गएको हुन्छ ।जसले जीवनमा आफू बाँच्नको लागि कति धेरै अविरल रूपमा संघर्ष गरी आइरहेका हुन्छन्, तिनीहरू नै ओझेलमा परेका छन् । हाम्रा गाउँघरका आमाहरूको संघर्षको कथा लेख्ने हो भने एउटा सिंगो महाभारत नै बन्न सक्छ । तिनीहरूले गरेका संघर्ष राम्रोसँग नियाल्ने हो भने कति दुःखदायी छ, पीडाको वर्णन गरी साध्य छैन । समयको अन्दाज गर्न नपाएर मध्यरातमा उठेर आकाशतिर हेर्दै ध्रुवताराको सहयोगबाट समय निक्र्योल गरेका हुन्छन् ।
काम गर्न ढिला हुन्छ भन्दै ढिकी, जाँतो, कुँडो, पानी, घाँस, दाउरा उज्यालो हुन नपाउँदै भ्याइसकेका हुन्छन् ।दिनभर खेतबारीमा काम गरेकै हुन्छन् । रात परेपछि घर फर्किंदा पनि उनीहरूले आराम गर्न पाएका हुँदैनन् । खाना बनाउने काम उनीहरूको पेवाजस्तै हो । खाना पकाउने, घरपरिवारका सबै सदस्यलाई खुवाउने र सुतिसकेका बच्चाहरूलाई उठाएर खुवाउने जिम्मा पनि यिनै आमाहरूको हुन्छ । भाँडा माझ्नु, घरभित्रको सरसफाइ गर्नु अनि भोलिका लागि व्यवस्था मिलाउनुजस्ता कार्यहरू पनि यिनै आमाहरूको थाप्लोमा परेको हुन्छ । आमाहरूले गर्ने काम एक प्रकारको सिक्रीजस्तो हुन्छ, जुन चुँडिनासाथ भताभुंग हुन्छ । यसरी हाम्रा आमाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत मानवीय अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । यस अवस्थाबाट मुक्त भई एउटा आमाले गरिबीको दुश्चक्रको श्रृंखला तोड्नु भनेको उनीहरूका लागि धेरै परको कुरो हो । उनीहरूलाई अघि बढाउनेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन र यही वृत्तमा नै आमाहरूले जिन्दगी बिताउनुपर्ने बाध्यता छ ।यी सबै कुराले आमाहरूको दुःखी जीवनलाई प्रदर्शन गरेको छ ।
उनीहरूको जीवन भन्नु नै यस्तै कष्टकर भएर बाँच्नु रहेछ । गरिबी उनीहरूको पेवा रहेछ, एक किसिमको पुख्र्यौली सम्पत्ति रहेछ । यसरी उनीहरूको जीवन गरिबीको चक्रमा रुमल्लिएको छ । अनि कसरी यी आमाहरू गरिबीबाट उम्कन सक्छन् त ?०००बाहरू पनि उस्तै छन् । उनीहरू पनि गरिबीभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । आमाभन्दा बा पनि कम कहाँ छन् र ? उनको पनि बेथा उस्तै छ । यी बाआमाहरूको धरतीमा आगमन यस्तै हुनका लागि आएको हुँदो रहेछ । उस्तै–उस्तैको दौंतरी जोडी उनीहरूकै अवस्थाले सिर्जना गरेको हुँदो रहेछ पनि ।धेरै बाहरूको टाउकोमा टोपी हुँदैन । कसैको भइहाले पनि नाममात्रको हुने गर्छ । लाज छोप्ने एउटा सानो टुक्राबाहेक अरू केही छैन । ६ महिनासम्म मज्जासँग पेटमा पटुका कस्नुपर्छ । अर्को ६ महिना मुस्किलले गुजारा चलाउनुपर्छ । बच्चाहरूले विद्यालयको मुख देखेका हुँदैनन् । अरूहरूले लाएको, खाएको देखेर टुलुटुलु हेरिरहेका हुन्छन् बच्चाहरू ।
उनीहरू बोल्न सक्दैनन् । आफ्नो घरमा भए पो आमाबासँग पिरोल्थे होलान् । घरमै नभएपछि केको लागि पिरोल्न सक्थे र ? मन कुँड्याएर झोक्रिएर बसिरहेका हुन्छन् बालबच्चाहरू पनि । खै ! अनि कसरी सुध्रन्छ त हाम्रा बाआमाहरूको अवस्था ? कर्णाली प्रदेशबारे सुने मात्र पनि पुग्छ । हेर्न सके झन् धेरै थाहा हुनेछ ।आमाहरूलाई विकासबारे अत्तोपत्तो केही थाहा हुँदैन । उनीलाई केवल थाहा छ गरिबी । बाहरूलाई विकासबारे टाउकोभरि हुने गरी घुसाइएका हुन्छन् । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी यावत् विषयबारे राम्ररी आश्वासन दिइने गरिन्छ । राम्रा–राम्रा र मीठा कुराहरूले बाहरू मक्ख बनाइएका हुन्छन् । अब त हाम्रा पनि दिन आएजस्तो लाग्छ उनीहरूलाई । विश्वस्त हुन्छन् पनि । नहुनु पनि किन ? ठूला–ठूला धेरै पढेलेखेका मानिसहरूले भनेपछि । उनीहरूलाई ठूलो महलको आवश्यकता होइन । राम्रा–राम्रा लुगा पनि चाहिने होइन । मीठो–मीठो खाना चाहिने पनि होइन । उनीहरूलाई त सामान्य टाउको ओत्न सक्ने घर, सामान्य लाज छोप्न सक्ने कपडा र नमीठो भए पनि पेट भरिदिने भोजन ।बाहरूले बुझेको विकास यत्तिमात्र हो— गाँस, बास र कपास । उनीहरूलाई यतिमात्र भए पुग्छ । अरू केही चाहिँदैन । यिनै कुरा अलाप्दाअलाप्दै उनीहरू जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगिसके । अझ उनीहरूका पुर्खाहरूको पनि कैयौं पुस्ता यसरी नै बितेको छ, आसैआसमा । तर पनि ती बाहरूले अझसम्म पनि विकास देखेका छैनन् ।
घरछेउबाटै चिल्लो सडक दगुरेको छ । एकपटक पनि बस चढ्ने क्षमता छैन उनीहरूको । बिजुलीका खम्बा ठाउँठाउँमा ठडिएका हुन्छन्, उनीहरूको छाप्रोमा टुकी बत्तीको अभाव छ । अरूका छोराछोरी पुस्तक च्यापेर विद्यालय गएका देख्दा यी बाआमाका छोराछोरी आफ्नै आँगनमा धूलो खेलिरहेका हुन्छन् । घरमै बसेर ठूला नानीबाबुले सानालाई हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि यी बाहरूको जीवनस्तर कसरी सुध्रने होला ? उनीहरूको दैनिकी कहालीलाग्दो छ नै । सुधार आउन कत्ति पनि सकेको छैन ।यी बाहरूलाई विकासबारे ठूला–ठूला कुरा घोकाइएका हुन्छन् । ठूला–ठूला आश्वासन बाँडिएका हुन्छन् । सबै चिज क्षणभरमै ठीकठाक हुने भनी विश्वस्त बनाइएका हुन्छन् । तर, क्षणभरको त कुरै नगरौं, पुस्तौंपुस्ता बितिसक्दा पनि यी बाहरूले झुट्को खेतीको आश्वासनबाहेक अरू केही पाउन सकेका छैनन् । यी बाहरूले विकासलाई देख्नै पाएनन् भने विकासले पनि बाहरूलाई छुनै सकेन । हो, यसरी बाहरूको विकासे जिन्दगी विकासै नदेखी अविरल नदी बगेजस्तै गरी पुस्तौंपुस्ता बगिरहेछ ।अन्त्यमा, आमाहरूले गरिबीसिवाय अरू केही बुझ्न सकेनन् ।
जन्मिदा पनि गरिबीमै जन्मिए । मृत्यु हुँदा पनि गरिबीमै मृत्युवरण गरे । त्यसैले गरिबीलाई राम्रोसँग बुझेका झन् उनीहरूले । गरिबीको दुश्चक्र सँधै आमाहरूको साथबाट छुट्न सकेन । बाहरूले देख्न र भोग्न खोजेको विकास पनि उनीहरूले अनुभव गर्न सकेनन् । पर्खंदा–पर्खंदा आमाहरूको जस्तै गरी बाहरूको पनि अन्त्य हुनेछ । तर, उनीहरूका लागि विकास कहिल्यै आएन ।विकास तलबाट माथि गर्दै जाने सिद्धान्त रटिँदै गए पनि यी बाआमाजस्ता पींधका मान्छेका लागि विकास आउनै सकेन । माथिका लागिमात्र हुने गरी विकास गर्ने मोडलको तर्जुमा गरियो । माथि विकास भरिएपछि मात्र अलि–अलि तल झर्ने विकासले मैले चिनेका यी बाआमाहरूको विकास खै कसरी होला र ? अहिलेको विकास भनेको त ड्याडी र मम्मी भन्नेहरूका लागि मात्र भएको देखिन्छ । होइन र ?
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)
होमवर्क ल्याए सर !!
महासंघमा मिश्रित परिणाम
आर्थिक विकास नै नेपाल–भारत सम्बन्धको मुख्य आधार
विकासका लागि ऋणको खोजीमा विगू
अमेरिकी सरकारको जलवायु परिवर्तन नीति : बाइडेन आएपछि सच्चिएला त ?
ताजा तथ्यांकअनुसार विश्वमा ५ करोडभन्दा बढी मानिस जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विभिन्न प्रकोपहरूबाट पीडित वा
विद्यार्थीलाई बिरानो बन्दै विद्यालय
संक्रमणको तीव्रताको आकलन गरेर स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अवलम्बन गर्दै विद्यालय खोल्नेतर्फ पनि सरोकार पक्षको ध्यान
जलविद्युत् उत्पादनका लागि सुविधा
कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि जलविद्युत्ले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले आज विश्वका धेरै